Shiinaha Taxanaha SGB qoyan Panel Strong Magnetic Separator warshad iyo alaab-qeybiyeyaal |Huate
Codsiga:Si looga saaro wasakhda birta ee habka qoyan iyo nadiifinta macdanta aan birta ahayn, sida quartz, sodium ama potassium feldspar.Intaa waxaa dheer, oo leh xoojinta magnetic sare, waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan oo lagu kala saaro macdanta magnetic daciifka ah, sida hematite, specularite, limonite, siderite, manganese ore, iwm.
1. Xoogga birlabeedka sare.Nidaamka magnetic wuxuu ka kooban yahay birlabyada dhulka dhifka ah ee NdFeB oo leh waxqabad sare.Waxay leedahay waji polye ah oo aad u ballaadhan, tiirar birlab ah oo badan.Waxay leedahay awood birlabeed aad u sarreeya iyo gradient magnet aad u sarreeya.Xoogagga magnetic ee qayb ka mid ah waxay gaari kartaa 17000Gs.
2. Gole birlab ah oo weyn oo leh aag kala soocida birlab iyo cuf-isjiid ballaaran.Waqtigan xaadirka ah, ballaca ugu weyn ee guddiga waa 2500mm, dhererkiisuna waa 3000mm.
3. Si siman u quudi.Ku quudi si isku mid ah oo siman oo leh guddi labajibbaaran oo sheeko ah.Oo lakabka macdanta waa khafiif ah.
4. Waxtarka birta-saaridda oo aad u wanaagsan.Waxaa jira suun kala duwan oo si gaar ah loogu talagalay in laga saaro birta ee doorashada macaamilka.Waxaa lagu sameeyay qalabka isku dhafan ee tayada sare leh, suunka wuxuu u adeegi karaa nolol dheer wuxuuna ka saaraa birta si cad.
5. Tamar-badbaadinta iyo badbaadinta biyaha.Waxa ku kaca hal matoor oo leh soo noqnoqosho yar, waa mid aad u badbaadinaysa tamar.Iyada oo nakhshad gaar ah oo la xakamayn karo ee nidaamka biyaha, Waa mid aad u badbaadiya biyaha.
6. Lammaanaha ugu fiican ee qaboojinta saliidda qasabka ah ee HUATE (WET HIGH INTENSITY MAGNETIC SEPARATOR, ie giraanta toosan ee kala soocida gradient sare ee magnet).La kaashado qaboojinta saliidda qasabka ah ee WHMS, waxay heli kartaa saamaynta ugu fiican ee birta-saaridda.
1. Halbeegyada farsamo ee kor ku xusan waa tixraacaada kaliya.
2. Qalabka waxaa loo qaabayn karaa sida ku cad qalabka wax lagu sameeyo ee kala duwan.
Hore: Kala-duwayaasha Electromagnetic Budada Qalalan oo Si Toos ah U Dhashay
Xiga: Taxanaha YCBG Kala soocida Magnetka Dhaqdhaqaaqa ee Ciidda Qalalan
Alaabta kala soocida birta ee aan birta ahayn ee gabi ahaanba
FG, FC hal xabbo / 2FG, 2FC labajibbaaran